၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်နှင့် အရက်အမျိုးမျိုးအတွက် အခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံထား – Eleven Media Group - Open Hluttaw
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်နှင့် အရက်အမျိုးမျိုးအတွက် အခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံထား – Eleven Media Group
Posted on ဩဂုတ် 27, 2018 မတ် 1, 2019 by zinmyohtetaung
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်နှင့် အရက်အမျိုးမျိုးတို့ အတွက် အခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံထားကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်၌ သြဂုတ် ၂၄ ရက်က ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ရက် မြောက်နေ့တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Source: ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်နှင့် အရက်အမျိုးမျိုးအတွက် အခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံထား – Eleven Media Group
This entry was posted in အထွေထွေ, လွှတ်တော်သတင်းများ, ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်, ဥပဒေဆိုင်ရာ. Bookmark the permalink.
← လွှတ်တော် ဆေးသုတ်စရိတ်ကွာဟမှု ဆောက်လုပ်ရေးအရာရှိတချို့ အရေးယူခံရ
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင် ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်၌ မေးမြန်း – Eleven Media Group →